Tungsten Arọ alloys - Luoyang esorowo Tungsten-Molybdenum Ihe Co., Ltd.
Elu njupụta, magburu onwe formability na machinability, pụtara ìhè corrosion na-eguzogide, elu modulus nke ekwedo, nnukwu thermal conductivity na ala thermal mgbasa. Anyị na-ewetara: anyị tungsten arọ metal alloys.
Anyị "heavyweights" na-eji ihe atụ, na ụgbọelu na aerospace ọrụ, ọgwụ na ahụ ike na nkà na ụzụ, akpakanamde na foundry ọrụ ma ọ bụ mmanụ na gas-egwu. Anyị nkenke atọ nke ndị a dị n'okpuru:
Anyị tungsten arọ metal alloys W-Ni-Fe na W-Ni-Cu nwere a karịsịa elu njupụta (17.0 ka 18.8 g / cm3) na-enye pụrụ ịdabere na echebe megide X-ray na gamma radieshon. Ma W-Ni-Fe na anyị na-abụghị magnetik ihe W-Ni-Cu na-eji echebe ihe atụ na ọgwụ ngwa ma na-na mmanụ na gas ụlọ ọrụ. Ka collimators na radieshon ọgwụ ngwá ha hụ ezi ihe ikpughe. Na guzozie igwe anyị na-eji nke karịsịa elu njupụta nke anyị tungsten arọ metal alloy. W-Ni-Fe na W-Ni-Cu mụbaa naanị ihe dị nnọọ nta na okpomọkụ na dissipate okpomọkụ karịsịa ọma. Dị ka ebu inserts maka aluminum foundry ọrụ, ha nwere ike ugboro ugboro na-ewe iwe na mma n'aghọghị kenkuwa.
Na Ọdụdọ Ihapu machining (EDM) usoro, ọla na-machined na-emefe larịị nke nkenke site eletriki discharges n'etiti workpiece na electrode. Mgbe ọla kọpa na graphite electrodes na-adịghị ruo ọrụ, na-eyi na-eguzogide tungsten-copper- electrodes na-enwe ike igwe ọbụna ike ọla-enweghị ike. Na plasma ịgba nozzles maka mkpuchi ụlọ ọrụ, na ihe onwunwe Njirimara nke tungsten na ọla kọpa ọzọ zuo ezu ibe n'ụzọ zuru okè.
Abatawo dara tungsten arọ ọla iso nke abụọ ihe mmiri. N'oge a abụọ-ogbo n'ichepụta usoro, a porous sintered isi mbụ na-emepụta si akụrụngwa na elu agbaze mgbe, ihe atụ a refractory metal, tupu oghe pores na-ahụ abatawo na liquified akụrụngwa na ala agbaze ebe. Njirimara nke onye components ịnọgide na-agbanweghi agbanwe. Mgbe nyochara n'okpuru microscope, Njirimara nke ọ bụla nke mmiri ka na-apụta ìhè. Mgbe macroscopic larịị, Otú ọ dị, Njirimara nke onye mmiri na-jikọtara. Dị ka a ngwakọ dara ihe onwunwe, na ọhụrụ ihe nwere ike, n'ihi na ihe atụ, nwere ọhụrụ thermal conductivity na thermal mgbasa ụkpụrụ.
Liquid na-adọ-sintered tungsten-arọ ọla na-arụpụtara si ngwakọta nke metal ntụ na a otu-ogbo mmepụta usoro n'oge nke mmiri na ala agbaze ihe na-gbazee jidesie ndị na elu agbaze ihe. N'oge nragide adọ, ndị a components etolite alloys na ndị nwere a elu agbaze ebe. Ọbụna a nnukwu ego nke tungsten, nke nwere nnukwu agbaze mgbe, na-etisasịwo n'oge nragide na-adọ. Plansee si mmiri mmiri na-adọ sintered mejupụtara ihe-erite uru site tungsten akụrụngwa nke njupụta, modulus nke ekwedo na ikike ya banye X-ray na gamma radieshon enweghị na-ata ahụhụ site na ihe ọ bụla nke drawbacks metụtara na nhazi nke dị ọcha tungsten Ma, ọnụọgụ nke thermal mgbasa na na thermal na ọkụ conductivity nke mmiri mmiri na-adọ-sintered mmiri adabere ka a dị nnọọ ukwuu ruo n'ókè nke mejupụtara abuana ke nragide na-adọ.
Back-nkedo ihe n'out oge ikpokọta ihe Njirimara nke abụọ dị iche iche ihe onwunwe mmiri. N'oge usoro a, ihe ha na-edebe na mbụ ha, ala ma na-agbụ naanị na a mkpa nkwụsị. The ọla na-gwakọtara na a ebu na-etolite a nkekọ nke nanị ole na ole micrometers na size. N'adịghị ka ịgbado ọkụ na soldering usoro, usoro a bụ karịsịa mụ na ana achi achi kacha thermal conduction.
Tzm Plate, Molybdenum Rod, Tzm Sheet, Molybdenum, Molybdenum mpempe akwụkwọ, Molybdenum efere,